Iji GPS Ndepụta Iji Dabere Onye useghọ Aghọ Aghọọla | Ngwọta OMG
Iswa na-etolite site na ụzọ ọ bụla. Anyị nwere ike ịhụ ọtụtụ ihe ọhụrụ a na-echepụta kwa ụbọchị. N 'ọnụego a, mmadụ ga-abanye n'ọgbọ ọhụụ nke jupụtara na ngwa na ngwaọrụ dị egwu. N'ime oke osimiri nke ihe ọhụụ na nke dị egwu, enwere ihe omimi sayensị nke ana - akpọ GPS. Yabụ, gịnị bụ GPS? Ka anyị nyocha ngwa ngwa, mgbe ahụ anyị ga-atụlekwu ya.
Gịnị bụ GPS Ndepụta Sistem?
GPS nọchiri anya “Global Positioning System”. Sistemụ GPS ckingchọtara GPS nwere ọtụtụ ngwaọrụ ana-eme ka ndị mmadụ nwee ike nyochaa ma soro ọnọdụ ha n'otu ntabi anya. Ọ nwere ike ịkọwa ebe ezigbo ụgbọ ọ bụla ma ọ bụ mmadụ ọ bụla n’oge ọ bụla. GPS nwere ọtụtụ ngwa ndị ọzọ. Enwere ike iji ya gbakọọ ọsọ, anya na oge. A ga - ejikwa ya wee jide ụgbọala ohi na, enwere ike iji ya jide nwunye na-aghọ aghụghọ.
Anyị enwere ike iji GPS jide nwunye ma ọ bụ di aghụghọ?
Ọ bụrụ na anyị hụrụ ya na mbụ, ọ dị obere. Dị ka, onye ga-ejide onye aghụghọ aghụghọ na-eji GPS Tracker? Mana ọ bụrụ n’anyị hụ ya nke ọma, anyị ga-achọpụta na iji GPS maka ịchụ onye aghụghọ n’uche bụ ụzọ kacha mma iji mee ya. Dịka anyị nwere ike ịhụ na GPS nwere ebumnuche bụ isi iji gosipụta ebe otu onye dị. N'ihe banyere di ma ọ bụ nwunye n'ịghọ aghụghọ ule, ihe dị mkpa bụ soro onye echere na ọ na-aghọ aghụghọ. Yabụ, maka azịza, ee! anyị nwere ike ma anyị kwesịrị iji GPS Tracker maka ịchụta di na nwunye aghụghọ.
O di nwute, nsogbu di na nwunye bu nsogbu ndi mmadu buru. Onye obula nwere nsogbu a na ndu ya. Na onye ọ bụla nwere ike ịda onye e merụrụ ahụ ọbụna ndị ọka iwu, ndị na-eme egwuregwu na ndị a ma ama.
E kwuwerị, ọ bụrụ na ndị kachasị mma na ndị bara ọgaranya enweghị ike ijigide ọkara nke onye kwesịrị ntụkwasị obi, olee ohere anyị nwere? Marlụ di ma ọ bụ di ogologo na-ebute nsogbu karịa ka mmekọrịta na-esikwu ike ka oge na-aga. Mgbe ụfọdụ, ndị nọ n'ụdị mmekọrịta ahụ na-amalite inweta nkasi obi na onye ọzọ. Nke a bụ ebe ọ ga-amalite ịgbada. Ọ bụ eziokwu dị na ọtụtụ mmekọrịta ogologo oge na enwere ọnwụnwa na ndagide, nke na-eduga n'inwe nsogbu nke nsonaazụ na-emebi ihe.
Gịnị kpatara iji GPS?
Ọ bụrụ na anyị ahụ nke ọma na mgbe ahụ anyị ga-amata na GPS bụ ụzọ kachasị mma iji jide nwunye aghụghọ. Ka e were ya na ọ bụrụ na di na nwunye aghọọ ụdị nsogbu a, ha ga na-enyokwu enyowanye kwa ụbọchị. Nke a ga - eme ka mmekọrịta ha ghara isi ike ma n'ọnọdụ dị oke njọ, nke a nwere ike ibute nkewa ha. Mana ọ bụrụ na ha ejiri ezigbo ngwaọrụ dị mma ma jide onye na-aghọ aghụghọ na ya, ha ga - edozi okwu ha naanị site na mkparịta ụka na mkparịta ụka. Yabụ, a ga-eji ntinye niile na-arụ ọrụ nke ọma na ngwaọrụ dị mfe ga-echekwa ndụ ha n'ọdịnihu.
Kedu ka mmadụ ga-esi mara ma onye òtù ọlụlụ na-aghọ aghụghọ?
Nsogbu dị na mmekọrịta dị iche iche maka di na nwunye ọ bụla mana enwere ụfọdụ nkọwapụta aka na-ahụ nke ga-eme ka aghụghọ nke mmadụ ghara ịdị. Otu n'ime isi ihe kpatara ya bụ enweghị ntụkwasị obi mberede. Dịka ọmụmaatụ, na mberede, mmadụ na-amalite inwe obi erughị ala banyere onwe ya ka ya na onye ya na ya nọ ọdụ. Nke a gosipụtara ihe ịrịba ama nke aghụghọ. Ọ na - abụkarị di na nwunye ji ndụ ha niile na-ebi ọnụ ka ha wee mara ihe gbasara ibe ha. Ọ bụrụ na mberede, mmadụ na-egosipụta akparamagwa dị iche, nke a bụ ihe ịrịba ama nke aghụghọ. Ekwentị mkpanaaka bụkwa ezigbo ezigbo isi iyi iji chọpụta maka aghụghọ di na nwunye.
Inweta GPS n'ịghọ aghụghọ ule na-eji GPS:
Anyị ahụla ọtụtụ ụzọ anyị ga-esi achọpụta ma onye òtù ọlụlụ na-aghọ aghụghọ ma ọ bụ na ọ naghị. Sistemụ GPS Tracking na-enye anyị ụzọ kachasị mma iji jide nwunye na-aghọ aghụghọ. Ka anyị leba anya n’ụzọ ụfọdụ nwere ike isi rụpụta ihe dị mma.
Imirikiti enwere ụdị GPS Trackers ejiri maka ebumnuche a:
Ọkwọ ụgbọ ala.
Ọchọ ihe nkeonwe.
A na-eji Tracker Vehicle Tracker, dị ka aha ya na-egosi, a na-eji nsuso ụgbọ ala nke ụdị dị iche iche. Mmadu aghagoro itinye tracker na ugboala nke aka ya nma. Ọ na-abata na ihe ndọta ọla nwere ike itinye aka na ngwa ụgbọ ọ bụla. N'ime igbe ahụ, enwere GPS Tracker jikọọ na satịlaịtị. Ọ na-achọpụta ụgbọ ahụ ma melite onye nke ọzọ. Yabụ, na, ọkara aka gị kwuo na ọ nọ n'otu ebe, ịnwere ike ịlele ngwa ngwa site na ịchọta ọnọdụ nke onye na-achọ ya. N'ụzọ dị otu a, mmadụ ga - ejide nwunye ya ma ọ bụ di ya aghụghọ.
Isi nke ọzọ bụ tracker onwe. Ọ na-arụkwa otu ọrụ ahụ dịka onye na-anya ụgbọ ala mana ebe idobere ya dịtụ iche. Ọ na-abata n’ụdị nke obere akpa nwere GPS Tracker n’ime ya. Enwere ike itinye akpa ahụ n’akpa ma ọ bụ n’akpa onye nke ọzọ. O nwere obere uru karịa n’ọdụ ụgbọ ala. Otutu, ugbo agha puru iche n'okporo uzo ma site na nkea, onye ahu puru ije ebe obula di ya nma. Yabụ, nsuso nsuso a bụ nke ụgbọala ebe nsachaghị nkeonwe perekebe. Ma n'otu oge ahụ, ọ nwere ọghọm. A na - ahụ ngwa ngwa nke trackers nkeonwe ma enwere ike ijide ya n'ụzọ dị mfe ma ọ bụrụ na achọpụta ya. N’aka nke ọzọ, ndị na-anya ụgbọala anaghị enwekarị njide n'ihi na ha siri ike ịchọta.
Iwu ọ nyere gị ka ọ bụrụ na ị na - eji GPS esochi di gị ma ọ bụ nwunye gị?
Enweela ọtụtụ esemokwu na nsogbu gbasara ihe a. Lawfọdụ ndị na-eme iwu ekwela ka i jiri GPS GPS sochie otu ma ọ bụ di na nwunye ebe ụfọdụ akụkụ nke ụwa, iwu akwadoghị ma ọ bụ nyochaa nwunye gị na-enyocha na ọ na-aghọ aghụghọ. Mana ọ bụrụ na anyị na-ekwu n'okwu dị mfe, dị ka anyị hụla n'elu, mmekọrịta ga-esiwanye ike ma na-esikwu ike ka enyo na-abawanye. Yabụ, ọ bụrụ na mmadụ ejiri track sochie onye ya na ya so, ọ bụrụgodi na o jidere ya na-aghọ aghụghọ, di na nwunye ahụ nwere ike idozi nsogbu ahụ na ikwu okwu. Nke a dị mma karịa inwe obi abụọ. Ya mere, n’uche m, iji GPS tracker soro nwunye di aghụghọ bụ ezigbo echiche.
Nzuzo 1875 16 Echiche Taa